Shiinaha oo canshuurta ku kordhiyay gawaadhida ay dadka ladan gataan - BBC Somali
Image caption Canshuurta la kordhiyay ayaa dhaqan galaysa maanta oo Khamiis ah
Dawladda Shiinaha ayaa soo bandhigtay qorshe ay canshuurta ugu kordhinayso 10% gawaadhida qaaliga ah, kuwaas oo ay ku jiraan Ferrari, Bentley, Aston Martin and Rolls-Royce.
Gawaadhida ay canshuurtani saamaynayso waa kuwa qiimahoodu ay ku kacayaan in ka badan 1.3 milyan oo yuan taas oo u dhiganta 189,000 oo doolar.
Xukuumadda Shiinaha waxay arrintaas ku macnaysay in ay uga golleedahay in lagu yareeyo isticmaalka lacagaha badan iyo wasakhawga hawada.
Waa qorshe ballaaraan oo Shiinuhu uu kaga soo horjeedo waxyaabaha lagu muujinayo qaninimada, kuwaas oo sidoo kale lagu bartilmaameedsaday shirkadaha kale ee gada waxyaabaha ay adeegsadaan dadka hodanka ah.
Shiinaha ayaa ah suuq muhiim u ah gawaadhida qaaliga ah.
Shirkadaha sameeya gawaarida ayaa sii hagaajinayay qaababka gawaadhiooda qaaliga ah si ay macaamiil uga helaan suuqyada Shiinaha.
Rolls-Royce iyo Aston Martin ayaa labaduba qorshaynaya in ay sanadka soo socda soo bandhigaan nooca SUV loo yaqaano, arrintaas ayaana loo arkaa in ay jawaab u tahay gawaarida tirada badan ee sports ka ah ee Shiinaha aadka looga daneeyo.